ब्लड प्रेसर लो भए के गर्ने ? जोखिम के हुन्छ ? – ramechhapkhabar.com
ब्लड प्रेसर लो भए के गर्ने ? जोखिम के हुन्छ ?
आजकल धेरै मानिसमा रक्तचाप सम्बन्धी रोगहरु देखा पर्दछ । तर कतिपयले भने रक्तचापको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिदैनन् । झन् लो ब्लड प्रेसरलाई त मानिसले हाइ ब्लड प्रेसर जस्तो गम्भिर मान्दैनन् । तर लो ब्लड प्रेसरको समयमा उपचार भएन भने गम्भिर समस्या आउन सक्छ ।
के हो लो ब्लड प्रेसर ?
सामन्यतया रक्तचाप १२०–८० हुनुपर्छ । तर, यदि तपाईको ब्लड प्रेसर ९०–६० वा त्यो भन्दा कम भयो भने यसलाई लो ब्लड प्रेसरको समस्या भनिन्छ । लो ब्लड प्रेसर हुन कारण निम्न छन् :
१. गर्भवती अवस्था
गर्भवती अवस्थामा महिलामा ब्लड प्रेसर लो हुन्छ । तर, यो अवस्थामा प्रेसर लो हुनु सामान्य हो । बच्चा जन्मभएपछि रक्तचाप सामन्य अवस्थामा आउँछ । यदि त्यसपछि पनि प्रेसर सामान्य भएन भने चाहिँ यसको उपचार गराउनु पर्दछ ।
२. मुटुको समस्या
यदि मुटुको भल्भमा समस्या, हृदयघात वा हृदयसम्बन्धी रोग छ भने यो अवस्थामा पनि ब्लड प्रेसर लो हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित प्रेसर परीक्षण गराई चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्दछ ।
३. इन्डोक्राइन समस्या
थाइराइड, रक्तअल्पता, लो ब्लड सुगर र मधुमेहमा पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा अपुग हुँदा न्युन रक्तचापको समस्या देखापर्न सक्छ ।
चोटपटकको कारण रक्तश्राव भएमा पनि अचानक शरीरमा रक्तचाप न्युन हुन सक्छ ।
६. पोषणको कमी
शरीरमा भिटामिन बि १२ र आइरनको कमीले एनीमिया हुन्छ । यसले गर्दा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रेड ब्लड सेल बन्दैन र ब्लड प्रेशर लो हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, पार्किसन्स, डिप्रेसनको धेरै औषधी सेवन गर्दा पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
यस अलावा अन्य बिभिन्न कारण जस्तै, चक्कर आउँदा, डेँगु मलेरिया, वा कुनै डरलाग्दो दृश्य देख्दा, तनावका कारणले पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
लो ब्लड प्रेसरका लक्षणहरु :
– कमजोरी महशुस हुनु– रिंगटा लाग्नु– धेरै तिर्खा लाग्नु– दृष्टि धमिलो हुनु– थकान लाग्नु– छालामा पहेंलोपन देखिन– शरीर चिसो हुनु
– छिटो छिटो सास बढ्नु
के लो ब्लड प्रेसर खतरायुक्त हुन्छ ?
न्युन रक्तचाप आफैमा खतरायुक्त भन्दा पनि यसले स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या निम्याउने क्रमश उपचार नभएको अवस्थामा भने बिस्तारै खतरा हुन्छ । लो ब्लड प्रेसरबाट हुने खतरा निम्न हुन् :
– यसले स्नायु प्रणाली वा मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ– गर्भावस्थामा रक्तचाप नियन्त्रण भएन भने बच्चालाई जोखिम हुन्छ– लो ब्लड प्रेसरकै कारणले मनोभ्रम, ब्रेन डिसअर्डर, मृगौला रोग लाग्न सक्छ– लो ब्लड प्रेसरका चक्कर आएर मानिस बिरामी हुनसक्छ– रगतमा संक्रमणको संभावना बढ्दै जान्छ
लो ब्लड प्रेसरबाट कसरी बच्ने ?
– लो ब्लड प्रेसर भएमा केही बढि मात्रामा नुनको सेवन गर्ने ।– नुनको सेवन मन पर्दैन भने सोया सस सेवन गर्ने ।– प्रसस्त मात्रामा पानी पिउने ।
– मदिराजन्य पदार्थबाट टाढै रहने ।– धेरै बेर उभिएर काम नगर्ने ।– लामो समयसम्म बसेर अचानक नउठ्ने ।– नियमित योगा, व्यायाम गर्ने ।– खानामा कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना कम गर्ने ।– पर्याप्त निदाउने ।– नियमित केही घण्टाको अन्तरालमा थोरै थोरै खाना खाने ।
लो ब्लड प्रेसर भएमा उपयोगी केही घरेलु टिप्स
१. १०/१५ वटा किसमिसलाई रातभर भिजाएर बिहान एक एक किसमिश चपाएर खाने र प्रसस्त पानी पिउने ।२. ७/८ वटा बदाम रातभर भिजाएर बिहान त्यसलाई पिसेर दुधसँग सेवन गर्ने ।३. १० वटा तुलसीको पातको रसमा १ चिया चम्चा महमा मिलाएर खाली पेटमा खाने ।४. हरेक दिन ब्ल्याक टि पिउने, यसले रक्तचाप बढाउन सहयोग गर्छ ।५. नुन, चिनीको सर्वतले पनि लो ब्लड प्रेसरमा लाभ गर्दछ ।
यदि कसैलाई ब्लड प्रेसर लो भएमा तुरुन्त प्राथमिक उपचार थाल्नु पर्दछ । सकेसम्म ढाडको बलमा बसेर खुट्टा अगाडी सारेर खुट्टा मुनि सिरानी राख्ने । यसो गर्दा मस्तिष्कमा रक्तप्रवाह बढ्दछ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा